I'm Good Explained — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
သူ / ငါဆဲငါ့အတရားရုံးနေ့စွဲခဲ့သည်မဟုတ်သော်လည်းငါအပြစ်ရှိသည်မဟုတ်ဟုဆိုသည်
ဤသည်အများအပြားယုံကြည်သူများကိုယျ့ကိုယျကိုတှေ့ရှိရပျကိုဖြစ်ပါတယ်. ကျနော်တို့ကနာကျင်မှုကိုသိ, စမ်းသပ်မှုတွေ, နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်အသေခံအံ့ဆဲဆဲဖြစ်ကြောင်း. ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကျွန်ုပ်တို့၏နားထဲမှာလေသံတိုးတိုးနှင့်ဤစမ်းသပ်မှုသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်၏အဆုံးကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြ- ဒါကြောင့်ငါတို့အဘို့အကျော်ရဲ့. သို့သော်သခင်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုပြောခဲ့တယ်ခဲ့ရာမဟုတ်ပါဘူး. သခင်ဘုရားသည်ကွောငျ့ခရစ်တော်၏ရှေ့တော်၌အပြစ်ရှိကြောင်းကိုမကြေညာလိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်တို့ကိုကတိထားတော်မူပြီ (ရောမ 4:5). ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည် (ယောဟနျသ 3:16). သေခရစ်ယာန်များအတွက်အဆုံးသည်မဖြစ်သေး; ကသစ်တစ်ခု၏အစအဦးဖြစ်ပါသည်, ပိုပြီးဘုနျးကွီးသောအဖြစ်မှန်.
ငါမြည်းစမ်းဖူးတဲ့ငါကိုယ်တော်မြင်ကြပါတယ်, ဒါကြောင့်ပဲ foretaste ရဲ့ပင်သော်လည်း /
ယေရှုသည်သေနှငျ့ဘုရားသခငျမှငါ့ကိုဆောင် သွား. ကြောင့်, (1 ပတေရုသ 3:18), ငါသူသည်ကောင်းကြောင်းကိုမြည်းစမ်းနဲ့မြင်ရပါတယ်. သို့သော်လည်းငါသည်ယခုမြည်းစမ်းပြီးပြီသောကျေးဇူးတော်တစ်ခုသာ foretaste ဖြစ်ပါသည်. တစ်နေ့မှာတော့ငါငါ၏သခင်နှင့်အတူဖြစ်လိမ့်မည်, နှင့်အပြည့်အဝအတွက်သူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစား.
ငါသူတို့ခံစားသောအရာကိုမသိကြပါ, ငါသူတို့စဉ်းစားမသိရပါဘူး /
သူ blinking သောအခါအကြှနျုပျ၏ဝိညာဉျရဲ့ဘယျသူမှမအောငျမာရီယိုနဲ့တူ BRO /
ဒီလိုင်းအတွက်, ငါမာရီယိုကိုကိုးကားနှင့်အတူအနည်းငယ်ပျော်စရာရှိခြင်းခဲ့သည်. သို့သော်လည်းငါသည်သည်ဟုဆိုဖို့မသတိထားခဲ့ ငါရယ် မရှုံးနိုင်သော. ငါဒဏ်ရာရနိုင်ပါတယ်, ငါစိတ်ဓာတ်ရနိုင်, ငါပင်သေဆုံးခဲ့ရနိုင်. သို့သော်ကြှနျုပျ၏ဝိညာဉျကိုသတ်သို့မဟုတ်ဖကျြဆီးခံရဘယ်တော့မှနိုင်, ငါသညျယရှေုအတွက်လုံခြုံတယ်သောကြောင့်,. စူပါမာရီယိုကအထူး Blink ကြယ်ရရှိသွားတဲ့အခါ,, နေပါစေသူသို့ပြေးအဘယျအရနျသူမြား, သူတို့ကိုယ်တော်ကိုထိခိုက်စေမနိုင်. အလားတူတစ်ဦးကိုရွေးနှုတ်တော်အသက်ဝိညာဉ်၏ဟုဆိုနိုငျ. ဖျက်စီးဖို့ငါ့ကိုယ် rip နိုင်, ဒါပေမဲ့ငါ့ဝိညာဉ်သည်နဂိုအတိုင်းဆက်ရှိနေဦးမည်. တဖန်ဘုရားသခင်ကငါတို့အဘို့အမြို့တမြို့ကိုပြင်ဆင်တော်မူပြီ (ဟေဗြဲ 11:16).
သူတို့ကဝမ်းမြောက်ခြင်းငါ့ကိုအပြည့်အဝကြည့်ရှု, အဘယ်သို့ငါသူမသောက်ကြဘူးနဲ့တူ /
Cup ကိုရေ bro နေထိုင်သောနှင့်ပြည့်ဝ၏, ငါက SIP နှင့်ကိုယ်တော်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ဟုတ်ကဲ့ဆရာ/
လူတွေကငါ့ကိုရုံးတင်စစ်ဆေးအလယ်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းအဘို့အတိုက်ခိုက်နေမြင်ရှုပ်ထွေးစေခြင်းငှါ. "ဘယ်လိုသူသည်ဤကဲ့သို့သောအချိန်အတွက်ပြုံးနိုင်?” သို့သျောလညျးငါအရူးသို့မဟုတ်အရက်မူးဘူး, ငါလုံခြုံတယ်. ငါထာဝရအသက်ကိုရေတွင်းထဲကနေ sipped င်, ငါ့ဝိညာဉ်ကျေနပ်မှုဖြစ်ပါတယ် (ယောဟနျသ 4:13-14).
ငါသည်တဂရမ်မီဆုမစေခြင်းငှါ,, သို့မဟုတ်အခြားကြယ် get /
သို့သော်လည်းငါသည်ငါ၏သခင်ထံမှဆုလာဘ်ရလိမ့်မယ်, ကပိုကောင်းဘာမျှမမက /
တဖန်ငါ chart မပြုစေခြင်းငှါ, ငါသည်တ milli ရောင်းချမပြုစေခြင်းငှါ /
သို့သော်လည်းငါသည်ကြှနျုပျ၏ရှငျဘုရငျကဝယ်ယူခဲ့, သူသည်ငါနှင့်အတူအစဉ်အမြဲဖွင့် /
ငါရှိသောကြောင့်ဤအပိုငျး wrote, ကမ္ဘာ့အမကျြမှောကျ၌အနုပညာရှင်တစ်ဦးအဘို့အောင်မြင်မှု၏အမြင့်မှတ်တမ်းများတစည်းရောင်းချနေနှင့်အသိအမှတ်ပြုမှု၏တစည်းရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်. သို့သော်လည်းငါသည်အခြားဇယားအပေါ်အခြားဆုချီးမြှင့်သို့မဟုတ်မြေယာရယူဘယ်တော့မှလျှင်ပင်, ရပါတယ်. ငါသည်ဤလောက၏ထံမှဆုလာဘ်မရစေခြင်းငှါ, ငါမူကားယရှေုထံမှဆုလာဘ်ရလိမ့်မယ်. အကြှနျုပျ၏မှတ်တမ်းများဘယ်သူ့ကိုမှကဝယ်ယူမရစေခြင်းငှါ, ငါမူကားယခုပင်သညျယရှေုကဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရွေးနှုတ်တော်မူခဲ့ကြရတယ်.
ဒါကြောင့်သူတို့ဘာတွေရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းပြောနေတာ? အဘယ်သူမျှမတို့သည်ငါ့ကိုဆင်းခေါမနိုင် /
Yessir ငါနာကျင်မှုကိုခံစားရပါဘူး, သို့သော်ယေရှုယခုအကြှနျုပျတယ် /
နောက်ထပ်တစ်ခါ, ငါရှေးရှေးငါခရစ်ယာန်တွေကိုရုံးတင်စစ်ဆေးရင်ဆိုင်ရပါဘူးဆိုလိုထင်ချင်ကြပါဘူး, ဒါမှမဟုတ်သူတို့အစမ်းသပ်မှုတွေ၏အလေးချိန်မခံစားရဘူးပင်က. ကျနော်တို့မကြာခဏပြင်းထန်သောဆငျးရဲဒုက်ခနှငျ့ရငျဆိုငျနေကြတယ်, သို့သော်ယေရှုကျွန်တော်တို့ကိုရှိပါတယ်.
ငါဆူညံသံအောင်တာပါဒါကြောင့်ဖွင့်, ငါခက်ခဲပြေးတာပါဒါကြောင့်ဖွင့် /
ငါဂေါ်ရီသွားကွောငျ့ဖွင့်, သူတို့ကိုတံထှေးနှငျ့ထှေးမျောက်အရက်ဆိုင် /
ငါမူကားအထက်ဖော်ပြခဲ့တဲ့သမ္မာတရားအပေါင်းတို့သည်ငါ့ကိုလှုံ့ဆျော. ငါကောင်းသောသတင်းနှင့်ထွက်ထားအယ်လ်ဘမ်ကိုကြွေးကြော်ဘယ်ကြောင့်ဤသူကား. ငါကလူရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုဖမ်းကြောင်းအရက်ဆိုင်တံတွေးထွေးချင်အဘယ်ကြောင့်ဤသူကား. ငါကောင်းသောအရာခပ်သိမ်း၏အရင်းအမြစ်မှသူတို့ကိုထောက်ပြချင်တယ်.
ဖိအားကိုစိန်ဖန်တီးနှငျ့မီးရွှေ refines /
ငါမနက်ဖြန်အဘို့အသကျရှငျနင်, ယနေ့ထိန်းချုပ်မှုထဲကဖြစ်ပါတယ်, fa sho, ရပါတယ်/
ငါ့အလိုရှိသမျှပိုက်ဆံ ယူ., ရပါတယ်/
yeah သူတို့ငါ့ကိုသတ်နိုင်, ရပါတယ်/
ငါ / ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်နာကျင်မှုမခံစားရဘူးဟုမထားဘူး
ကိုယ့်ကိုသင်ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ကိုထုတ် ယူ. မသွားနိုင်ဟုဆိုတာပါ, အကြောင်းမရှိ homie ကျွန်တော်တို့ကောင်းသော /
ဤရွေ့ကားသီချင်းစာသားတော်တော်လေးကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှင်းလင်းကြသည်. ကောင်းသောထိုသီချင်းကို "၏အခြေအနေတွင်” ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်စုံလင်သောသို့မဟုတ်ဖြောင့်မတ်တာမဆိုလိုပါ. ကျမ်းစာကျနော်တို့ကိုမဆို၏စစ်မှန်တဲ့မဟုတ်ပါဘူးသိ (ရောမ 3:11-12). "ရပါတယ်” ဟုဆို၏အခြားနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်, "ငါသည်အေးမြတယ်” သို့မဟုတ် "အရာအားလုံး ok ပါပဲ။” ငါတို့သည်ခရစ်တော်ကိုရောက်နေသောကြောင့်, သငျသညျကိုအကြှနျုပျတို့မှအရာအားလုံးကိုယူနိုင်ပါသည်, ငါတို့သည်ခရစ်တော်ကိုအတွက်ကျောက်ချရပ်နားနေသောကြောင့်, ငါတို့မူကားကောင်းသောနေ.
ငါ I'ma ခံစားကြောင်းကိုငါသိ၏, ကသာငါ့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်လုပ်ပါလိမ့်မယ် /
သခွေငျးတရား, ငါ၏သစ္စာရှိသောသူကိုနှစ်သက်ဖို့ကျွန်မကိုယူမှည့်တစ်ဦးတံခါးဝဖြစ်ပါတယ် /
တမန်တော်များကဲ့သို့ကျမ်းပိုဒ် 14:22 နှင့်2တိမောသေ 3:12 ခရစ်ယာန်တစ်ဦးအဖြစ်ငါခံရလိမ့်မည်ကိုငါသတိပေး. ထိုအခါယာကုပ်ကတူကျမ်းပိုဒ် 1:4-8 နှင့်ရောမ 8:28 ဘုရားသခင့ပိုပြီးခရစ်တော်ကဲ့သို့ငါ့ကိုစေခံစားနေရပြီးတစ်ခုကိုငါ့ကိုသတိပေး. ဤရွေ့ကားစမ်းသပ်မှုတွေပင်ငါ့အသက်ကိုယူစေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူများသည်သေခြင်းကိုကွောကျရှံ့စရာမလို. ယရှေုသညျသခွေထဲကလက်နက်သိမ်းယူခဲ့သည်, ကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုနှင့်အတူဖြစ်ဘို့ဤအရပ်၌ဖြစ်ဖို့ထက်ကအများကြီးပိုကောင်းမယ့်.
ငါနှင့်အတူအကြှနျုပျ၏ဝိညာဉျ၏ Lover, သငျသညျညီအစျကိုကိုလှုပ်နိုင် /
သို့သော်သင်သည်ငါ့ကိုဆင်းခေါသို့မဟုတ်အောက်မှာငါ့ကိုယူဘယ်တော့မှ, မိုဃ်းကြိုးဆောင်ကြဉ်း /
သူကကျွန်တော်တို့ကိုတစ်စီရင်ချက်တယ် bro သူတို့ဟာ / ငါတို့မှငါတို့သခင် ယူ. မသွားနိုင်
အပြစ်ရှိကြောင်းမ, သူကအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူမယ့်သူပစ္စုပ္ပန်အဲ့ဒီအချိန်မှာ /
ဤရွေ့ကားနောက်ဆုံးခြောက်ခုဘားအားလုံးတယောက် anchoring သမ္မာတရားသက်သေခံ, သခင်ဘုရားသည်ငါနှင့်အတူဖြစ်ပါသည်. ထိုအမှုဖြစ်ပျက်, သူကဆဲသည်ငါနှင့်အတူဖြစ်လိမ့်မည်. ခရစ်တော်အတွက်ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်မှငါ့ကိုခွဲခြားနိုင်သည်ကိုဘာမျှမလုံးဝရှိပါတယ်! (ရောမ 8:38-39)
ငါ့အကွောငျးအရေးအပါဆုံးအရာငါသညျယရှေုစည်းလုံးညီညွတ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်. ဒါကငါ့ထံမ​​ှယူရမည်ဘယ်တော့မှနိုင်. ငါ၏အလမ်းလာဘာပဲ, သူကပြောသည်ငါ့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီ, "ဒါဟာငါ့ဝိညာဉ်နှင့်အတူကောင်းစွာဖြစ်ပါတယ်။”
M.J.S. • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:41 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ခိုင်မာသော, အစွမ်းထက်ဂီတအစ်ကို. ငါအဘို့အဗီဒီယိုစောင့်ကြည့် “ရပါတယ်,” ထိုသို့သငျသညျကမျြးစာကိုဖတ်နေဘို့မွတ်ဆလင်မိန်းကလေးကိုယ်ထိလက်ရောက်နှိပ်စက်လျှက်၏မြင်ကွင်းတစ်ခုကို ရွေးချယ်. ဘာကြောင့်စပ်စုငါ့ကိုစွန့်ပစ်?
မွတ်စ်လင်သူတို့လူမျိုးမှယူဆောင်ညျဘုရားသခငျ၏အနာဂတ္တိကျမ်းနှင့်ကျမ်းစာစောင်များ၏အားလုံးအတွက်ယုံကြည်. မွတ်စ်လင်ယေရှုကိုမယုံကြည်ကြဘူးတဲ့အများစုနေထိုင်ပြီးအထငျမှားရှိပါသည်. ယုံကြည်ချက်အတွက်သော့ချက်ခြားနားချက်မွတ်စ်လင်တစ်ဦးတမန်တော်မြတ်အဖြစ်ယေရှုမှတ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ, နှင့်အစ္စလာမ်ဘာသာအတွက်အဘယ်သူမျှမတမန်တော်မြတ်သည်အခြားထက်ပိုပြီးသိသာထင်ရှားသောအဖြစ်မှတ်နေသည်.
ဒီ post ကိုအဘို့အကြှနျုပျ၏ရည်ရွယ်ချက်ဘာသာတရားကိုငြင်းခုံဖို့မဟုတ်ပါဒါပေမယ့်မှားယွင်းသောသတင်းအချက်အလက်ပြန့်ပွားအဆုံးသတ်နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းဖယျရှားဖို့. ငါသည်သင်တို့ကိုအခင်းဖြစ်ပွားရာနှင့်အတူသိရှိစေရန်ရည်ရွယ်အဓိပ္ပာယ်အဘယ်အရာကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်မသိရပါဘူး(ငါမေးမွနျးတာဘာကြောင့်လဲရဲ့), ဒါပေမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကမျြးစောငျကိုရည်မှတ်မွတ်စလင်ယုံကြည်ချက် system ကိုလှဲ.
Woleogundele • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:41 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Loyd • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:41 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သငျသညျသိငါ့အဘို့ဤအမှုကိုကျေးဇူးပြုပြီးရနိုင်ပါသလား. ငါတကယ်ဟူသောစကားလုံးရွေးချယ်မှုပေါ်တွင်သင်၏အတွေးဖြစ်စဉ်ကိုသိလိုပါတယ်. သင် rap ရှိရာအထူးသအစိတ်အပိုင်း “ငါအချို့မိသားစုများတက်ကွဲတော့, ငါအပျက်အစီးများဖြစ်ပေါ်စေရန်လူသိများတယ်။” ငါသည်ဤကျမ်းပိုဒ်အပျေါမှာငါ့ကိုယ်ပိုင်ယူရှိပေမယ့်သင်တို့ကိုငါအဓိပ်ပာအတိအကျသိခငျြ. သင်ဤလုပ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးကြောင့်ချွေးထွက်မရကြပါလျှင်ကျွန်မနားလည်. ကလူခရီးစဉ်ရောက်ရှိသိမ်းဆည်းထားပါ. ya Thang သလား! ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ!
Leslie • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:42 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အကြှနျုပျ၏ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပို့စ် :) ငါသည်သင်တို့ကိုသမ္မာကျမ်းစာ၌ရည်ညွှန်းနှင့်သင့်သီချင်းစာသားနောက်ကွယ်ကအတွေးဖြစ်စဉ်ကိုနှင့်အတူဤသီချင်း posted ဒီတော့ပျော်ရွှင်မိပါတယ်. အကြှနျုပျ၏9နှစ်အရွယ်သားနဲ့ကျွန်မနှစ်ဦးစလုံးသည်သင်၏ဂီတကိုချစ်, ငါကျနော်တို့ကအီစတာတနင်္ဂနွေရက်တွင်စတင်ရှေ့မှာထိုသူကိုနှင့်အတူအချို့သောအရည်အသွေးကိုအချိန်ဖြုန်းဖို့မနက်ဖြန်ကိုချွတ်ယူတာ. ဒီသီချင်းစာသားမှတဆင့်သွားနှင့်တစ်ဦးချင်းစီတဦးတည်းနှင့်အတူကျမ်းစာ၌တက်ကြည့်ဖို့ယျတျောနှငျ့အတူအခြမ်း-by-side ထိုင်ဖို့မစောင့်နိုင်. သူဟာစိတ်လှုပ်ရှားဖွစျလိမျ့မညျ! သငျသညျခရီးစဉ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်, Orlando တွင်ထံမှအလွန်ချစ်, FL!!
Wayland Wilson က • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:42 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
DC ကဧရိယာ၌သင်တို့၏ဤဝမျး. တစ်ခါတလေတစ်ချိန်ချိန်သင်သို့ Run ဖို့တရုတ်တန်းမျှော်လင့်ချက်အတွက်ဆွဲထား. ငြိမ်းချမ်းရေး.
Brandon caron • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:43 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သငျသညျဘလော့ဂ်ရှိသည်ကိုသိရန်စိတ်လှုပ်ရှား. အခြိနျမှနျမှအတွင်းစစ်ဆေးနေစတင်ရန်ရပါလိမ့်မယ်. ငါသတိမထားမိခဲ့.
အာရုန်သည် Fillmore • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:43 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်ဤမှအားကစားရုံနားထောင်အတွက်ဝိညာဉ်တော်သည်အပြောင်းအရွေ့ခကိုခစျြ…လူတွေကိုကျွန်မသိပ်-ငါ em ပြောပြနားထောင်ခြင်းတယ်ဘယ်အရာကိုမမေး #imgood
migisha ဘှိုငျဒျ • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:43 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ညှဉျးဆဲ akwongele! ဘုရားသခင်အဘို့ _luganda သင်သည်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့”
Shola ရော့ခ် • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:43 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ခရစျတျောအဘို့အ rapping သိမ်းဆည်းထားပါ. ငါသည်ခပ်သိမ်းသောသင့်ရဲ့အယ်လ်ဘမ်ကိုချစ်. ရှိသမျှသည်ခရစ်တော်၏ဗဟိုပြုနှင့်ကျမ်းစာနေကြတယ်. ကိုယ်တော်၏အသံကိုကျွန်တော်လည်းအေးမြသည်နှင့်သင်အသုံးပြုနေတဲ့စည်းချက်ကြောက်မက်ဘွယ်ရှိပါသည်; ဘုရားသခငျသညျသငျသညျ bro ကောင်းကြီးပေးတော်မူ!!!
Kananelomojaki • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:43 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Henock Teshome • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:44 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
tina • သြဂုတ်လ 21, 2013 တွင် 11:18 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါ့သား (9) ကိုယ်ကဒီသီခငျြးကို luv! ဒါဟာနောက်ကွယ်ကထိုသို့သောကြောက်မက်ဘွယ်နှင့်အစွမ်းထက်အဓိပ္ပာယ်ကို :)